भारतसामु निरीह नेपाली स्वाभिमान – Chitwan Post
भारतसामु निरीह नेपाली स्वाभिमान
केही वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एकाएक पाँच महिना नाकाबन्दी लगाउनु र हाल पाम तेल नेपालबाट जान नदिएर प्रतिबन्ध लगाउनुमा भिन्नता के छ ? केही वर्षअघिको प्रतिबन्धमा बरू नेपालीले बनाएको संविधान भारतलाई मान्य नभएको भनिन्थ्यो । तर, भारतको सोच पाम तेल बेचेर नेपालीहरु सजिलोसँग बाँच्न सक्लान् भन्ने कारणभन्दा अरु के नै होला र ! पङ्क्तिकारले बारम्बार यस अर्थमा अभिव्यक्ति दिँदै आएको हो कि भारतले नेपाललाई सजिलोसँग जीविका गरोस् भन्ने कदापि चाहन्न । त्यसका निम्ति नेपालको उत्पादनमा वृद्धि होस् भन्ने भारत चाहन्न । मर्नचाहिँ नदिने, सुख र शान्तिपूर्वक बाँच्न पनि नदिने, यो नै नेहरूदेखि मोदीसम्मका ११२ वर्षको भूमिका रहँदै आएको छ ।
उदाहरण हेरौँ– फकाएजस्तो पारेर बोलिहाल्ने, बोलेको कार्यान्वयन भने नगर्ने मोदीको सोच सधैँ देखियो । पहिलोचोटि आएर एक खर्ब आर्थिक सहयोगको घोषणा गरे । पाँच वर्ष बित्यो होला, भुक्तान गरेनन् । त्यसको व्याज अथवा मुनाफा नै उत्तिकै उपलब्ध भयो होला । नेपालीले उब्जाएको सम्पूर्ण कृषिजन्य वस्तु कहिल्यै बिनाझन्झट र शुद्ध व्यवहारले प्रवेश गर्नै दिएनन् । अलैँचीको बढ्ता उब्जाउ देखेर भारतले अत्यन्त रिस ग¥यो । नेपालबाट युरोप, अमेरिकाका निम्ति पठाएको नेपाली गलैँचामा पनि भारतले अनेक षड्यन्त्र ग¥यो । नेपाली गलैँचा झिकेर भारतीय गलैँचा घुसाएर पठाउने काम भयो । यसरी फस्टाउँदो गलैँचा उद्योग भारतको शत्रुतापूर्ण रवैयाले ठप्प नै पारिदियो । अरु त अरु गोलभेँडासम्म पनि स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश गर्न दिएन । यसको प्रमुख कारणचाहिँ अत्यन्त भारतको भक्ति र दासत्व मनोदशा नै हो । यदि साँच्चै राष्ट्रप्रतिको स्वाभिमानले ओतप्रोत हुने हो भने भारतलाई भोलि नै उथलपुथल बनाउन सकिने गाँठी कुरा नेपालमा छ ।
कारण हो, भारतको सुरक्षा नै नेपाली रगतले दिइराखेकै छ । नेपालका शासक वर्ग राष्ट्रभक्त भए भारत नै नेपालको ज्यूहजुरी नगरी जिउनै सक्दैन । कोशी र गण्डकीको योजना उसैको भूमिमा लैजाने आदेश गर्ने नेपाली शासक भए उसको हविगत के हुन्छ होला ? पटकपटकको सङ्कट भारतले सिर्जना गर्दा साथ दिने वा सहयोग गर्ने उत्तरी चीनलाई चाहिँदा भाँडो, नचाहिँदा ठाँडो बनाउनेहरुले चीनप्रति इमानदारिता देखाए भारतसँग हात धोएको पानीसम्म नलिए पनि नेपाल समृद्ध हुन धेरै समय लाग्दैन ।
२०४४ सालवरपरको कुरो हो, राजीव गान्धीले नेपाललाई पूरै १८ महिना नाकाबन्दी लगाए । तर, सही कुरा भन्दा भारतजस्तो पाँच हजार वर्ष अर्काको गुलाम देश होइन नेपाल । नेपाललाई गुलाम बनाउन दुष्प्रयास गर्नु सोह्रै आना डकैती होइन र ? सायद, कतिपय भारतभक्तहरु भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थन पनि गर्ने होलान् । किनभने, त्यो व्यवस्था पञ्चायती थियो । पञ्चायती व्यवस्था राजाको थियो । व्यवस्था जसको भए पनि स्वदेशीकै छ भने त्यसको रिसमा आफ्नो सार्वभौमिकता गुमेको नबुझ्ने हुस्सु दिमागको सोच हो त्यो । त्यसको एउटा सामान्य उदाहरणले पनि पुग्छ । चीनमा च्याङकाइसेकको शासनकालमा उनको विरूद्ध विद्रोह गर्दै गर्दा चीनकै भूमिमा कुनै बाटो जापानको उपनिवेश थियो । माउत्सेतुङले च्याङकाइसेकसँग प्रस्ताव राखे– ‘जापान विदेशी हो, त्यसले तिमीलाई पनि खान्छ र मलाई पनि खान्छ किनभने तिमी र म स्वदेशी हौँ । पहिले विदेशीलाई हटाएपछि यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता बच्छ, हामी आपसमा लड्दै गरौँला ।’ यो माओको युक्तिसङ्गत सुझावलाई स्वीकारेर संयुक्त कार्यक्रम बन्यो, च्याङकाइसेक र माओत्सेतुङको ।
यसबाट जापानी साम्राज्यवादलाई भगाउन उपयुक्त मेलोमेसो बन्यो । जापान लखेटियो पनि । पहिलेका दुई शत्रु मित्र बनेर जापानलाई भगाइछोडे । जापानी लखेटिएपछि, दुई शत्रु फेरि घरेलु युद्ध गर्न सुरू गरे । यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्र भनेको आपूm सार्वभौम हुनु हो । आफ्नो सार्वभौमिकता नभए गल्लीको कुकुर घरको न घाटको जस्तो भइन्छ । कतिपय हाम्रा भारतभक्तहरु हाम्रो दार्चुला जिल्लामा भारतीय हस्तक्षेप गरिराखेकालाई गौरव नै ठान्छन् होला ।
१८ महिना राजीव गान्धीले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लाउँदा नेपाली जनताले नाकाबन्दीको महसुस नै गरेनन्, जति पीडा र दुःख नरेन्द्र मोदीका पाँच महिनाको कालमा भोगे । १८ महिनाको नाकाबन्दी कोदारी राजमार्गले धानेकै हो, त्यस्तो राजमार्ग अहिले खोइ ! खासै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । सुचारू भए÷नभएको नै पारदर्शिता छैन । यही हो चीनलाई विश्वास दिलाउन सक्नु÷नसक्नु भन्ने कुरा । तर के गर्नु, आफ्नैहरु आत्मसमर्पणवादी भएपछि । मोदीको पाँचमहिने नाकाबन्दी कालमा केपी शर्मा ओलीले उत्तरी नाका ७० वर्षे अवधिमा मुस्किलले खुलाएका त हुन् नि, तर सम्पूर्ण सुविधाको ढोका खुलिसकेर पनि कार्यान्वयन गर्न मोदीको मुख नताकी हलचल हुँदैन । त्यसैले हो, आँट र आत्मबल अनि लम्पसार नीतिको सङ्कट । पाम तेल, शुद्ध घिउ प्रतिबन्धको घोषणा सुनाइयो । उसले गर्ने काम ग¥यो । उसलाई कूटनीति र कुनै विधि चाहिँदैन ।
अब पाम तेलको कुरा गर्नुपर्दा कूटनीतिको जाल अगाडि बिछ्याउँछ । यो एउटा टार्ने निहुँ हो । भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाल भिœयाएको वर्ष बित्न आँट्यो । खोइ, पाइला चालेको ! अन्यायको सीमा नाघिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रमा पुग्ने आँट खोइ ? केले छेक्यो यो प्रक्रिया ? प्रस्ट छ, भारत र चीन एउटै छिमेकी होइनन् । चीन मित्र हो, भारत दुष्ट । के भारतकै आधारमा नेपाली बाँचेका छन् ? तर, यो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएर पनि स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने आँट नआउनु दुर्भाग्य हो ।
राजीव गान्धी र नरेन्द्र मोदीले त पारदर्शितापूर्वक नै नाकाबन्दी लगाएका हुन् । इन्दिरा गान्धीले पनि एकपटक नाकाबन्दी लगाएको भनिन्थ्यो । जे होस्, दक्षिणी छिमेकी हाम्रो मित्रभन्दा शत्रु बढी हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । एउटै कुरा हो, आआफ्नो मानु खानुछ । लेनादेना घरघरमा चल्छ । सधैँको पीडा, हैरानी र दुश्मनै बनाएर गर्ने व्यावहारिक कारोबार धर्तीमा कहिन्छ जस्तो लाग्दैन र हुँदैन पनि । नेपालबाट भारतले लाभैमात्र उठाएको छ, तैपनि पीडितै भएर आफ्नो दुःख, कष्टले बाँच्नुपर्दा खल्लो लाग्छ । यसैलाई भनिन्छ, ‘नामर्दकी स्वास्नी हुनुभन्दा मर्दकी कमारी हुनु बिसेक ।’
सत्य र तथ्य कुरा लुकाउन पर्दैन । राजा भन्नेबित्तिकै शत्रु ठान्ने हो भने भूपू राजा महेन्द्रको राज नचलेको भए नेपाल नेपाल रहने थिएन । कांग्रेसले राणा धपाउन नेतृत्व गरेको त हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको नाम पनि कांग्रेसैबाट लेखिएको हो, तर भूपू राजा त्रिभुवनलाई नेपालैमा भारतीयहरुको निर्णयले नेपालको राज्य सञ्चालित थियो । नेपालको २५ जिल्लामा रहेको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना तैनाथ थियो । कालापानीमा भारतीय सेनाको तैनाथी पनि उसै बखतको हो । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री र महेन्द्र राजा हुँदा हटाइएको हो । के देशबाट विदेशी फौजको तैनाथीलाई हटाउने राजालाई उल्लु भन्ने ! कीर्तिनिधि विष्टले भारतीय फौज हटाएको, मरीचमान सिंहले १८ महिना भारतीय नाकाबन्दीको बिनाकठिनाइ सामना गर्नु, के यी व्यक्तिहरु मूर्ख हुन् भन्ने ?
बरू, बी.पी. ले मोहनशमशेरसँग संयुक्त सरकारको गठबन्धन बनिरहेकै बेला भारतले मोहनशमशेरको नाममा शान्ति तथा मैत्री नामको असंवैधानिक विधेयक लागू गरेर नेपालको घाँटीमा पासो लगाउँदा बी.पी. र मातृकाकै सल्लाहअनुसार बनाइएको हुनुपर्छ । आपूm सत्तामा प्रवेश गर्ने कुरा भैसक्दा चुप बस्नु दालमा कालो पनि थियो । एउटा अर्को कुरा, भारतका सामु नेपाल अभियुक्त भएको थियो ? किन र के कसुरमा भारतले नेपालमा कानुन लगाउने ? यदि नेपाली छोरा नै राज्यको भागीदार हुन लायक हुन् भने यो कानुन बदर गर्न पनि नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न अन्तर्राष्ट्र जानुपर्छ । चुपचापमात्रै बसे पनि स्वतः असंवैधानिक कानुनसरह हुन्छ ।
इमेल : chitwanp[email protected]